Johnny Depp က ၆ ရက်(လက်ရှိအချိန်) Instagram မှတဆင့် "Warner Bros၏ 'Fantastic Beasts and Where to Find Them 3'တွင် Grindelwald wizard နေရာတွင် သရုပ်ဆောင်ရန် ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး လေးလေးစားစား အဲ့လိုလုပ်ပါမယ်" လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။Johnny Depp သည် လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၈ခုနှစ် 'Johnny Depp သည်ဇ
ENT | Nang 기자 | 2020-11-11 20:23
“Seobok” ရုပ်ရှင်ကို ကြော်ငြာရန် Gong Yoo က “You Quiz on the Block” တွင် ပါဝင်ရန် အတည်ပြုပြီး ရိုက်ကူးရေးနှင့် ထုတ်လွှင့်သည့် နေ့ကိုတော့ အတည်မပြုရသေးပါ။“Seobok” ရုပ်ရှင်သည် ပထမဦးဆုံး လူ့ကိုယ်ပွား Seobok(Park Bo-gum)ကို လျှို့ဝှက်ပြီး ပြောင်းရွေ့သည့် နောက်ဆုံးတာဝန်ယူရသော ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင့် Ki Heon
ENT | Nang 기자 | 2020-11-11 20:21
Park Shin-hye ဆံပင်အတိုကနေ ဆံပင်ရှည်နဲ့ ပိုချောနေ
"ဒီနေ့ ရိုက်ထားတာ။ ကျွန်မကတော့ ဒုတိယပုံကို ကြိုက်တယ်။ ပရိသတ်တွေကကော?" ဆိုသော စာနှင့် ကြော်ငြာ ရိုက်ကွင်း ဓာတ်ပုံများကို Instagram တွင် တင်ခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံတွင် Park Shin-hye သည် မော်ဒယ်လ်အဖြစ် လုပ်နေသည့် Brand၏ ကြော်ငြာ ရိုက်ကွင်းကို တွေ့ရသည်။ ဤကြော်ငြာတွင် ဆံပင်တိုမှဆံပင်ရှည်သို့ ပုံစံ ပြောင်းပြီး အရ
ENT | Nang 기자 | 2020-11-10 20:53
[BBANGYA News | သတင်းထောက် Mo Mo] tvN ရုပ်သံလိုင်းရုပ်သံလိုင်း၏ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ကြာသပတေးနေ့ ဒရမ်မာ 'The Tale ofaGumiho' သည် ၇ ရက်နေ့ ညနေတွင်အွန်လိုင်းမှ ထုတ်လုပ်မှု ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။၇ ရက်နေ့ ညနေတွင် tvN ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ကြာသပတေးနေ့ ဒရမ်မာအသစ် 'The Tale ofaGumiho' (ဒါရိုက်တာ Kang Shin-hyo၊ ဇာတ
ENT | MoMo 기자 | 2020-10-09 20:00
[BBANGYA News | သတင်းထောက် Mo Mo] သရုပ်ဆောင် Hwang Jung-eum သည် လက်ထပ်ပြီး (၄) နှစ်အကြာတွင် ကွာရှင်းခဲ့ကြောင်း သတင်းကိုကြေငြာခဲ့ပြီး အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြပြီး ကွာရှင်းခဲ့သည့် အကြောင်းရင်းကတော့ privacy ဖြစ်သည်။လွန်ခဲ့သော ၂ရက်နေ့တွင် တာ၀န်ရှိသူများစွာ၏အဆိုအရ Hwang Jung-eum သည် ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုလျှောက်
ENT | MoMo 기자 | 2020-09-07 19:40
[BBANGYA News | Reporter Khaing] Kim Kardashian သည် ဒီဇိုင်နာ Thierry Mugler ကဒီဇိုင်းလုပ်ထားသော ရေကူးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။၃ရက်နေ့(ကိုရီးယားအချိန်)တွင် ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး Kim Kardashianက သူမ၏ Instagramမှတဆင့် "ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး ဝတ်နိုင်‌တာကြောင့် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်"ဟု ဒီဇိုင်နာ Thierry Muglerကို ကျေးဇူ
ENT | Khaing 기자 | 2020-09-03 18:55
[BBANGYA News | Reporter Mo Mo] မင်းသမီး Son Ye-jin(ပုံပါ)သည် ဂျပန်ပရိသတ်များနှင့် အွန်လိုင်းပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ “Crash Landing on Love” ဒရာမာသည် ဂျပန်တွင်လူကြိုက်များမှုအတွက် fan serviceပေးခြင်း ဖြစ်သည်။၂၀ ရက်နေ့တွင် 'The Television' ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာများအဆိုအရ ' Crash Landing of
ENT | MoMo 기자 | 2020-09-01 18:16
Group G.O.D သည် ပထမဆုံးအကြိမ် Debut လုပ်ပြီးနောက် ဒရမ်မာ OST တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်
[BBANGYA News | Reporter Nang] Group G.O.D သည် ပထမဆုံးအကြိမ် Debut လုပ်ပြီးနောက် ဒရမ်မာ OST တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။၂၆ ရက်တွင် SBS ၏ တနင်္လာနေ့နှင့်အင်္ဂါနေ့ ဒရမ်မာအသစ် “Do you like Brahms?” နှင့် သက်ဆိုင်သူက “G.O.Dက ဒရမ်မာOST တွင် ပါ၀င်မည်။” ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။G.O.Dသည် “ Champion” ရုပ်ရှင်နှင့် animation စသည
ENT | Nang 기자 | 2020-08-31 17:39
[Bangya News | သတင်းထောက် Khaing] သရုပ်ဆောင် Lee Jung-jae က လူရွှင်တော် Yoo Jae-seok နှင့် တမူထူးခြားသော မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးကို ဖော်ပြခဲ့သည်။Lee Jung-jae နှင့် Park Jung-min တို့သည် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော SBS Power FM 'Dosei Escape Cult To Show' ၏ guests အဖြစ် ပါဝင်ပြီး `Deliver Us From Evi
ENT | Khaing 기자 | 2020-08-12 19:32
[Bangya News | Nang သတင်းထောက် ] ဟောလိဝုဒ်၏ ပထမဆုံး K-pop အကြောင်းအရာဖြင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။“ Seoul Searching” ရုပ်ရှင်၏ ဒါရိုက်တာ Benson Lee သည် အထွေထွေဖျော်ဖြေရေးအေဂျင်စီ SB Project နှင့် Epic Magazine နှင့် ပူးပေါင်း၍ K-pop ရုပ်ရှင်ကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ကြီး
ENT | Nang 기자 | 2020-08-07 18:28
[BBANGYA NEWS ｜သတင်းထောက် Nang] Park Bogum သည် ၁၀ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပရိသတ်များ၏ Twitterတွင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ tweetsနဲ့ ပြန်ဖြေခဲ့သည်။၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Twitter စသုံးခဲ့ပြီး သူသည် ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာ တစ်ခုတည်းသာ အသုံးပြုသည်ဟုပြောကြားခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၃၀ ရက် မတိုင်ခင်အထိ တစ်ခါမှ မဖြေခဲ့ပါ။ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက
ENT | Nang 기자 | 2020-08-06 17:08
[Bangya News |သတင်းထောက် Nang] coronavirus ကူးစက်မှု (Corona19) ကြောင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ နောက်ဆုတ်ခဲ့သော Disney ရုပ်ရှင်ဖြစ်သော 'Mullan' သည် နောက်ဆုံးတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ရုပ်ရှင်ရုံတွင် ပြသခြင်းကို လက်လျှော့လိုက်သည်။ Disney သည် 'Mulan' ကို အွန်လိုင်းဗီဒီယို streaming ၀န်ဆောင်မှု (Disney Plu
ENT | Nang 기자 | 2020-08-06 16:19
[BBANGYA NEWS သတင်းထောက် Khaing] JBJ95 သည် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နှင့် ၉ ရက်များတွင် ၎င်းတို့၏ပထမဆုံး online ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို 'RETRO: 95' မှတဆင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ပရိသတ်များနှင့် တွေ့ဆုံမည်။ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပသော အာရှပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံပွဲသည် ၁၄ လအကြာတွင် ကျင်းပသော ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်သည့် 'AWAKE' သည်
ENT | Khaing 기자 | 2020-08-06 15:41
[BBANGYA NEWS သတင်းထောက် Mo Mo] တေးရေးအဆိုတော် BOL4 သည် ၂၀၀၃တွင် ထုတ်လွှတ်ခဲ့သော BoA ၏' Atilantiss Princess 'တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။JINBYJIN သည် Super Junior၊ SHINee၊ Red Velvet နှင့် NCT127 တို့နှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့သော ကျော်ကြားသောထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးသည် သီချင်းကို retro punk pop အဖြစ် ပြန်လည် rearrange
ENT | MoMo 기자 | 2020-08-06 14:09
[BBANGYA NEWS ၊ သတင်းထောက် Jisoo Lee] We Go Up ၊ NCT ၏ Cherry Bomb သို့မဟုတ် EXO ၏ Love Shot ကို VOD သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းရှိုးပွဲတွင် ဘယ်တော့မျှမကြည့်ရနိုင်‌လောက်တော့ပါ။ထိုကဲ့သို့သော Taeyeon ရဲ့ 'Fine', EXO ရဲ့ 'Tempo' စသည့် နာမည်ကျော်သီချင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူ MZMC သည် မတ်လတွင် SM
ENT | MoMo 기자 | 2020-07-14 19:41
[BBANGYA News | သတင်းထောက် Lee Ji-soo] သရုပ်ဆောင် Park Bo-gum သည်သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်တွင် သီချင်းသစ် “ All My Love” ကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။Park Bo Gum ၏ အေဂျင်စီ Blossom Entertainment က Instagram တွင် Park Bo Gum ၏ debut နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဖြစ်သော သြဂုတ် ၁၀ ရက်တွင် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ထုတ်လွှင့်မည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
ENT | Nang 기자 | 2020-06-17 18:24
[BBANGYA News | Reporter Park Kyung-soo] "Gang Syndrome" မှ Rain (Jeong Ji-hoon) သည် Levi's ပြီးနောက် "Shrimp Gang" ၏ ကြော်ငြာမော်ဒယ် အဖြစ် ရွေးချယ် ခံခဲ့ရသည်။မကြာသေးမီက အွန်လိုင်းတွင် လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သော 'Gang' သီချင်းသည် ခေတ်စားလာပြီး တစ်ရက် တစ်'Gang' Syndrome ဖြစ်ပြီး မကြာသေ
ENT | Khaing 기자 | 2020-06-12 16:15
ကိုရီးယား ဒီဇိုင်နာ ထုတ်ကုန် Black Pink Lisa ကြောင့် sold out ဖြစ်သွားသော 'ဒီလည်ဆွဲ'ဟာ ကိုရီးယား ဒီဇိုင်နာ ထုတ်ကုန်?
[Bangya News | သတင်းထောက် Park Kyung-soo] Black Pink Lisa သည် သူမ ဆွဲ‌သော လည်ဆွဲကို sold out ရောင်းကုန်သွားသောကြောင့် 'Sold Out Queen' အဖြစ် ခေါ်ခံခဲ့ရသည်။Lisaကို ကြော်ငြာမော်ဒယ်အဖြစ် ခန့်ထားသော အလှကုန် အမှတ်တံဆိပ် Moonshot၏ တရားဝင် official အကောင့်တွင် လွန်ခဲ့သော ၈ ရက်နေ့တွင် Lisa ၏ မဂ္ဂဇင်းဓာတ်ပုံ
ENT | Nang 기자 | 2020-06-12 12:24